यस्तो बन्यो एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय टिम, को कहाँबाट अटाए ?
७ असोज, काठमाडौं । नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गरेको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेताहरुको कार्यविभाजन गरेको हो । समाजवादीको पदाधिकारीहरुमा माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष र झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता छन् । मुकुन्द न्यौपाने भने नेपाल र खनालपछि तेस्रो वरियतामा रहेका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तीन सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ। विहीबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले तीन सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ७१ सदस्यीय पोलिटब्युरो बनाउने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताए।
केन्द्रीय समितिले महासचिवमा बेदुराम भुसाललाई चयन गरेको छ। उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पाण्डे, धर्मनाथप्रसाद साह, प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत, केदार न्यौपाने, केशवलाल श्रेष्ठ र जयन्ती राई चयन भएका छन्। उपमहासचिवमा प्रकाश ज्वाला, डा. गंगालाल तुलाधर र डा. विजय पौडेल छन्।
यस्तै, सचिवमा रामकुमारी झाँक्री, जगन्नाथ खतिवडा, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी र राजेन्द्र राईलाई चयन गरिएको छ। यसअघि सचिवालय बैठकमा राईको नाम सचिवमा प्रस्ताव नगरिएको भए पनि केन्द्रीय समितिले उनलाई सचिवमा चयन गरेको हो।
पार्टीको वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल रहने यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ भने नेतामा मुकुन्द न्यौपानेलाई चयन गरिएको छ। योसँगै नेपालका राजनीतिक दलमध्ये एकीकृत समाजवादी सबैन्दा समावेशी बनेको छ । पदाधिकारीमै दुई जना महिला भएको एक मात्र पार्टी हो ।
काँग्रेसमा र एमालेमा एक जना मात्र महिला पदाधिकारी छन् भने माओवादी र जसपामा महिला पदाधिकारी नै छैन । यस्तै लोसपा, राप्रपा विवेकशील साझामा पनि एकीकृत समाजवादी जस्तो समावेशी कमिटी छैन ।
एकीकृत समाजवादीमा भूगोलको प्रतिनिधित्व समावेशी बनेको छ । एकीकृत साजवादीले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय समिति पूर्ण समावेशी बनाएको छ।